သင် ဘယ်လိုမှ မတွေးမိနိုင်လောက်မယ့် အစားအသောက် ကုန်ပစ္စည်းအတုများ...! - Thadin
HomeKNOWLEDGEသင် ဘယ်လိုမှ မတွေးမိနိုင်လောက်မယ့် အစားအသောက် ကုန်ပစ္စည်းအတုများ…!
သင် ဘယ်လိုမှ မတွေးမိနိုင်လောက်မယ့် အစားအသောက် ကုန်ပစ္စည်းအတုများ…!
February 10, 2019 Kay Kay KNOWLEDGE Comments Off on သင် ဘယ်လိုမှ မတွေးမိနိုင်လောက်မယ့် အစားအသောက် ကုန်ပစ္စည်းအတုများ…!
အာလူးနဲ့ ပလတ်စတစ်တွေကိုရောပြီး ဈေးကွက်မှာတင်ရောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ သာမန်ထရုတ်ထမင်းစားတဲ့ ပန်းကန်လုံးလေးနဲ့ သုံးလုံးကုန်အောင် စားမယ်ဆိုရင် ပလတ်စတစ်အိတ် တစ်အိတ်ကို စားမိတာနဲ့ တူသောအကျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ မချက်ခင်တော့ အတုအစစ်ခွဲရမှာ ခက်ပေမယ့် ချက်ပြီးတဲ့အခါ သာမန်ထက်ပိုပြီး သိသိသာသာ မာနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဆန်ဟာ အတုဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေပါပြီ။
ထမင်းဝါးလိုက်တဲ့အခါ မာနေလို့ ကြည့်လိုက်တော့ ဆန်ဟာအတုဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ ဆန်အတုဆိုပေမယ့် ဒီဆန်ကတော့ စက္ကူလေးတွေကို ပုံပါအတိုင်းလိပ်ပြီး ပြုလုပ်ထားတာပါ။
အသားပေါက်စီထဲမှာပါတဲ့ အသားတွေဟာ အညိုရောင်ကတ်ထူ စက္ကူတွေကို ဓာတုဆေးတွေနဲ့ ပျော့အောင်လုပ်၊ နုတ်နုတ်စင်းကာ ဝက်အဆီတွေနဲ့ရောပြွန်းပြီး ပေါက်စီထဲအစာသွတ်ထားတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုစားသောက္ကုန် အတုတြေ ပေါ်နေပြီဆိုတာ အားလုံးသိထားကြေပမယ့် အခုနောက္ပိုင်းမွာ အားလုံးသတိမေ့နေကြပါပြီ။ အစားအေသာက္ဆိုတာ လူတြေအာဟာရျဖစ္ဖို့ စားသောက်ေရပမယ့် အခုလို အန္တရာယ်ရွိတဲ့ မ်ိုးဓာတုဗေဒပစ္စည်းတြေနဲ့ အစားအေသာက်တြေကို အတုအပျပုလုပ္တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်အတြက် ဘာကောင်းက်ိုးမွ မရနိုင္တာကြောင့် ကြည့်ရွောင်ေရအာင် ဖော်ျပေပးလိုက္ပါတယ်နော်။
ကေလးနို့မှုန့်ကေတာ့ အမ်ားဆုံးတုပပြီျးပုလုပ်နေတဲ့ စားသောက္ကုန္ပစ္စည်းတြေပျဲဖစ္ပါတယ်။ နို့မှုန့္ထဲက ပရိုတင်းဓာတ္ကျိုမှင့္တင္ဖို့အတြက် မယ္လမင္ဓာတ်တြေကိုအဆမတန္ထည့်လေ့ရွိပါတယ်။ ဒီလိုနို့မှုန့္ကိုသောက်သုံးပြီး တရုတ်ျပည္မွ ကေလးပေါင်း (၅၃၀၀၀) လောက် နေထိုင္မေကာင်ျးဖစ္ကာ တခ်ို့ကေလးတြေဆို ကေ်ာက္ကပ္မွ ကေ်ာက္မ်ာျးဖစ်ပေါ်ကာ သေဆုံးသြားတာတြေတာင် ရွိခဲ့ပါတယ်။
ခေါက္ဆြဲတို့ ကြာဇံတို့ဆိုတာ ဂ်ုံနဲ့လုပ္တျာဖစ်ပြီး သုံးတဲ့ဂံ်ုတြေဟာ တိရိစ္တာန်အစာကျြေးလို့ မရေလာက္တဲ့အထိ မှိုတက်ပြီး ပုတ်သိုးနေတဲ့ ဂံ်ုတြေပါ။ နောက်ပြီး ကင္ဆျာဖစ်စေမယ့် ဓာတုဗေဓပစ္စည်းတျြေဖစ္တဲ့ ဆာလဖာဒိုင်အောက္ဆိုဒ်တြေနဲ့ပါ ရောပြီျးပုလုပ္ထားပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက မြို့နယ္တစ္နယ္ထဲမွာပဲ ခေါက္ဆြဲနဲ့ကြာဇံ အတုလုပ္တဲ့ စက်ရုံပေါင်း (၅၀) ကေ်ာ်လောက်ရွိပြီး စက်ရုံတြေ မမိခင္ကဆိုရင် တစ်နေ့ကို (၁.၁) မီလီယံ ပေါင် ပ်မ်းမ်ွထုတ္လုပ်လေ့ရွိပါတယ်။
ပုစြန်တြေကို အေကာင္ပိုကြီးသေယာင် ထင်ေရအာင္လို့ အခြံတြေထဲကို gelatin ထိုးသြင်းလေ့ရွိပါတယ်။ ဒါကြောင့္လည်း ရွိရင်းစြဲအေလးခ်ိန္ထက် (၂၀) သို့မဟုတ် (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပိုလေးသြားလေ့ရွိပါတယ်။
တကယ့္ဘဲသြေးအစစ္က ဈေျးမင့္တာကြောင့် ပိုဈေးသက်သာတဲ့ ကြက်သြေးတို့ ဝက်သြေးတို့ကို ဆိုးဆေးတြေရာပြီး ဓာတုပစ္စည်းတစ္မ်ိုျးဖစ္တဲ့ formaldehyde နဲ့ရောကာ ဘဲသြေးဆိုပြီး ရောင်းလေ့ရွိပါတယ်။
သောက်ရေကေတာ့ ရေမွာအန္တရာယ်ရွိတာ မဟုတ္ဘဲ ရေထည့္တဲ့ဗူးက အန္တရာယ်ရွိနေတာပါ။ ဗူးမွာ E. coil လို့ ခေါ်တဲ့ ဘတ္တီးရီးယားတစ္မ်ိုးနဲ့ အန္တရာယ်ရွိတဲ့ မှိုတြေ စြဲကပ္လ်က်ရွိပါတယ်။ ဒီလို ဗူးခြံတြေကို မသန့်ရွင်းဘျဲပန်သုံးတာဟာ သန့်ရွင်းရေးလုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းအတြက် ငြေအကုန်အက် သက်သာစေတဲ့အတြက္ပျဲဖစ္ပါတယ်။ တစ်နွစ္ကို အခုလို အန္တရာယ်ရွိတဲ့ ရေဗူးတြေဟာ ဗူးပေါင်း (၁၀၀) မီလီယံလောက် ရောင်းခ်ရေလ့ရွိပါတယ်။
ပုလင်းတြေ ကြည့္လိုက်ရင်တော အေကာင်းစားလို့ ထင်ေရပမယ့် ဝိုင်ဖေ်္စာပ္တဲ့အခါ အသုံျးပုထားတဲ့ အရက္နဲ့ပါဝင္ပစ္စည်းတြေကိုတော့ လုံးဝအေပါစားတြေ သုံးထားတာပါ။ ဟိုတယ်တြေ၊ စားသောက္ဆိုင်ကြီးတြေက ပစ္ထားတဲ့ပုလင်းတြေကို ယူသုံးပြီး ထုတ္လုပ်လေ့ရွိပါတယ်။
သစ်ကြားသီးအခြံတြေထဲကို ကြန္ကရစ္နဲ့စက္ကူတြေနဲ့ရောထည့်ပြီး အခြံကို က္နောဲ့ကပ္ပိတ္ကာ ဈေးကြက္မွာတင်ရောင်းခဲ့ဖူးတဲ့ မွတ္တမ်းတြေရွိပါတယ်။
အာလူးနဲ့ ပလတ္စတစ်တြေကိုရောပြီး ဈေးကြက္မွာတင်ရောင်းလေ့ရွိပါတယ်။ သာမန္ထရုတ္ထမင်းစားတဲ့ ပန်းကန္လုံးလေးနဲ့ သုံးလုံးကုန်အောင် စားမယ္ဆိုရင် ပလတ္စတစ်အိတ် တစ်အိတ္ကို စားမိတာနဲ့ တူသောအက်ိုျးဖစ်စေပါတယ်။ မခ်က္ခင်တော့ အတုအစစ္ခြဲရမွာ ခက်ပေမယ့် ခ်က်ပြီးတဲ့အခါ သာမန္ထက္ပိုပြီး သိသိသာသာ မာနေဦးမယ္ဆိုရင်တော့ သင့္ဆန်ဟာ အတျုဖစ္ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းမ်ားနေပါပြီ။
ထမင်းဝါးလိုက္တဲ့အခါ မာနေလို့ ကြည့္လိုက်တော့ ဆန်ဟာအတျုဖစ်နေပါတယ္တဲ့။ ဆန်အတုဆိုပေမယ့် ဒီဆန္ကေတာ့ စက္ကူလေးတြေကို ပုံပါအတိုင်းလိပ်ပြီျးပုလုပ္ထားတာပါ။
အသားပေါက္စီထဲမွာပါတဲ့ အသားတြေဟာ အညိုရောင္ကတ္ထူ စက္ကူတြေကို ဓာတုဆေးတြေနဲ့ ပေ်ာ့အောင္လုပ်၊ နုတ်နုတ္စင်းကာ ဝက်အဆီတြေနဲ့ရောပြန်းပြီး ပေါက္စီထဲအစာသြတ္ထားတတ္ပါတယ်။
ဈေးကအသားတြေရဲ့ အမ်ားစုဟာ ကြက်သားတျြေဖစ်
ကြက်သာ၊ ဘဲသား အထူးသျဖင့် အမဲသားတို့အစား ကြက်သားတြေကို အသုံျးပုပြီး ရောင်းလေ့ရွိပါတယ်။ အေလးခ်ိန္ပိုစီးနေအာင္ကိုလည်း ဓာတုဆေးတြေနဲ့ ထိုးထားလေ့ရွိပါတယ်။
ကမ္ဘာကို အကြီးအက်ယ် ဂ်င်းထည့္ခဲ့တဲ့အထဲမွာ ကြက်ဥအတုတြေလည်း ပါ,ပါတယ်။ အေစးရည်၊ ကော်ျဖူမှုန့်၊ ခဲနဲ့ အေရာင္ဆိုးဆေးတြေကို အသုံျးပုပြီးတော့ ကြက်ဥ အကာကျိုပုလုပ်ပြီး ဆိုဒီယမ် အယ္လ္ဂ်ီနိတ်၊ အညိုရောင်ရွိတဲ့ရေညှိကိုတော့ အကြင်းအက်န်တြေရယ္ကေတျာ့ပစ်အောင္လုပ္ဖို့အတြက် သုံးပါတယ်။ ကြက်ဥအနွစ္ကိုလည်း မတူညီတဲ့အေစရည္နဲ့ အေရာင္တင္မှုန့္ကို အသုံျးပုပြီး ကြက်ဥကျိုပုလုပ္တာပါ။ ကြက်ဥအခြုံကိုတော့ ဖေယာင်း၊ ဂ်စ္ပ္ဆင်ပေါင္ဒါမှုန့္နဲ့ ကယ္လဆီယမ် ကာဗြန္နိတ္တို့ကို ရောကာ ပုံစံသြင်းထားကြပါတယ်။
ကျောက် ကျသွားတာ ဝမ်းသာလို့ ရောဂါတူ သူငယ်ချင်းတွေကိုကိုယ်သောက်နေတဲ့ဆေးလေးတွေ ပြောပြချင်လို့ပါ…!
This Month : 35564
This Year : 177021
Total Users : 536045
Total views : 2424691